Maalinta: Oktoobar 20, 2019
IMM waxay racfaan ka qaadataa Udiyada Haydarpasa Isniinta!
15 sannadlaha ah ee Hezarfen, oo uu leeyahay maamulaha guud ee hore ee hay'adda Okcular Foundation, oo helay qandaraaska in TCDD ay u furtay kireynta bakhaarradii taariikhda Haydarpaşa iyo Xarunta Tareenka Sirkeci ee Xilli-sannadeedka 2 [More ...]
Metro Istanbul, 2 ayaa sameysay bayaan ku saabsan guuldarada
Magaaladda Istanbul ee Magaalo Xeebeedka Metro Istanbul, Yenikapi-Ataturk Airport iyo khadka metro Yenikapi-Kirazli waxay sameeyeen bayaan ku saabsan guuldaradan. Qoraalka, "Duullimaadyadayada waxaa lagu sameeyaa inta u dhexeysa Sağmalcılar-Airport iyo Otogar-Kirazlı." In Istanbul, [More ...]
Rikoodhkii Rakaabka ee Magaalada Istanbul Jimcihii
Xisaabaadka warbaahinta bulshada ee 'Metro Istanbul' ayaa ku dhawaaqday in rikoorka isticmaalka la jebiyey Jimcihii. Diiwaangeliso M2, Khadadka M5 iyo wadarta tirada safarka! 18 Oktoobar 2019 Jimcihi M2 Yenikapi-Haciosman metro [More ...]
Maxay Tareenadu Tahay Derail?
Mısra Öz Sel, oo ay ku weyday wiilkeedii Oğuz Arda Sel iyo afadiisii ​​hore Hakan Sel intii ay ku sugnaayeen tareenka magaalada Çorlu, ayaa qayb libaax leh ka qaatay akoonkeeda warbaahinta bulshada. Masaafo dheer oo isku xidha Istanbul masaafada Kazlıçeşme ee Marmaray [More ...]
Saldhigga Tareenka Eskişehir wuxuu mar labaad u adeegi doonaa si waafaqsan asalka
Saldhigga Tareenka Eskişehir, oo ah halka dib u soo celinta iyo xoojinta shaqooyinka laga bilaabay sanadkii hore, dib ayaa loo furi doonaa iyadoo la raacayo asalka. Shaqooyinka waxaa loo qorsheeyay in lagu dhammeeyo sanadka 2020. Iyada oo la raacayo aragtida cusub ee wadooyinka tareenka ee dalkeena, tareenka xawaaraha sare ku socda iyo [More ...]
Guusha Injineerka iyo Wax soo Saarida 'TÜMOSAN'
Necmettin Erbakan 1975 sano markii ay ka saareen amar ah Wasaaraha State iyo Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Farsamada iyo Chemical Industry Corporation (MKEK), Turkey Beeraha Qalabka Corporation (TZDK), Şekerbank Turkey Maritime Bank iyo State [More ...]
Cabbiraadda Masawirinta Isgoysyada Karaman
Degmada Karaman ayaa muraayadaha ka dhigtay labada dhinacba isgoyska iyo wadooyinka halka aragtidu ay ciriiri tahay. Agaasinka Dowlada Hoose ee Karaman ee Adeegyada Gaadiidka, ama [More ...]
Antalya Metropolitan Transportation Inc. iyo Antalya Rugta Ganacsadayaasha iyo farshaxanimada iyadoo la kaashanayo adeegyada gaadiidka dadweynaha ee Seminaarka xakamaynta xanaaqa. Dhaqan xasaasiya oo dabeecad tusaale ah [More ...]
Gaadiid bilaash ah oo loo raaco Mukhtaar ku yaal Izmir
Duqa Magaalada Izmir Tunç Soyer, Gawaarida 1 ee Nofembar waxay bilaash ku noqon doonaan mukhtars lagu dhawaaqay. Dawlada Hoose ee Magaalada İzmir waxay abaabushay Maalinta Mukhtaar ilaa 2015, iyo carwo cadaalad ah oo laga soo agaasimay magaalada İzmir. [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha ee Maalinta Republic ee İzmir 1 Kuruş
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, 29 Oktoobar Maalinta Lacagta Gaadiidka Dadweynaha 1 penny waxay go'aansatay inay noqoto. Turkey, October 29 2019 Tuesday, xnumx'nc dabbaal-degi doonaa sanad guuradii ee aasaasay Jamhuuriyadda. Ciidaha qaran ee Izmir [More ...]
Isbitaalka Akçaray ayaa la dhameystiri doonaa ilaa furitaanka ..!
Duqa magaalada Kocaeli Tahir Büyükakın ayaa bixiyay warka wanaagsan. Qeybta isbitaalka magaalada Akçaray ayaa la dhameystiri doonaa ilaa furitaanka isbitaalka magaalada. Horey u soco Kuruçeşme [More ...]
Maanta Taariikhda 20 Oktoobar 1885 Sida ku xusan wararka ka soo baxa Wargeysyada Ankara Vilayet, dadka Ankara waxay waydiisteen wado tareen oo ay codsigooda u gudbiyeen Wasaaradda Arimaha Gudaha iyo Suldaanka. 20 Oktoobar 1921 Kadib heshiiskii Ankara ee uu la galay Faransiiska, Ulukışla-Mersin [More ...]